Xa uceba uhambo oluya eYurophu, umele ucinge iinketho ezininzi kangaka! iindawo Endless kunye namava, akwazi ukuba ukuhamba iminyaka kwaye uzive ingathi kubuzwa into kubalulekile. Oku kungakhokelela ekwenzeni ifayile ye- iimpazamo zokuhamba Yokuzibophelela ngaphezulu, kwaye uphulukana kwiinkcukacha ezincinane ezenza zokuhamba kunye zokuhamba uloliwe omlingo kangaka. Silapha ukuze bakuxelele into ofanele ukuyenza kwaye Indlela ukucwangcisa i uhambo eYurophu, ukusuka ekuqaleni ukuya ukugqiba!
Phambi kokuba kufumana Tapas lakwa- Spanish, piazzas eRoma, okanye imihlaba ephahleni ePrague, i bit ebalulekileyo admin iyafuneka! Kalula, ngakumbi walungisa wena xa uceba uhambo oluya eYurophu, enkulu amathuba akho fun kunye uhambo xi-ehlala izinto endandilindele yakho.
Nantsi ke ingcebiso yokugcina uloliwe: ukhethe eziphezulu ezintlanu, kumele-dos ukuba adventure European! Mhlawumbi kuya&#8217;s besela kwi - Hofbrauhaus ngo eMunich, okanye ukuthatha uhambo umsele ku Amsterdam, okanye ngokuhlola uDavide-kumacala amaninzi – e Florence. Nakuphi na, balumkeleni abo phantsi ucwangcise uhambo lwakho ezibangqongileyo. Okungcono ngu loliwe.
Ngoku ukuba siye safumanisa ukuba ufuna ukucwangcisa i uhambo eYurophu, olandelayo ukhetha amawzi akho phezulu. Xa umoya yolo, ungafuna ukuya ngaphandle kwebala engqushiweyo kwaye phendla i ubuncwane obufihliweyo ngaphakathi imizi. Kodwa hipster ngaphakathi kwenu ofuna ukuya kulwa zawo ezingqongileyo zesiqhelo, ungafuna ukuthatha isihlalo. On umkhokeli ibhasi. Kukho isizathu sokuba iindawo ezifana i Colosseum, Eiffel Tower, yaye Charles Bridge are all ethandwa kakhulu kunye nabakhenkethi: engu awesome! Ungaziva ngathi kufuneka ufumane kwindlela yokubetha ngenxa yakho. Ukuba enkulu iindawo ezinika umdla zotyelelo sebecela kuwe, uye ubone ukuba.
Icebiso 4: Hlanganisa amaxwebhu akho okuhamba njengenxalenye yesicwangciso sohambo oluya eYurophu
Njengoko kuchaziwe ngaphambili, kulula ukuzibophelela ngaphezulu kwaye uzame ukucofa kakhulu. Yinto Kuyaqondakala ngokupheleleyo. ikhefu lakho elixabisekileyo kufuneka zisetyenziswe kakuhle, ngoko ke kulula ukuzama phezu-apakishe yohambo zakho xa uhlela uhambo oluya eYurophu. kunjalo, oku kungaba yindleko (singasathethi kuyakhathaza), kuka-ukupakisha iihambo kunye kwiindawo ezininzi kakhulu kwiintsuku ezimbalwa kakhulu kukhokelela ixesha elininzi endleleni, kunye negesi ngaphezulu okanye amatikiti etreyini. Kwiimeko kakhulu, oko ulimaze uhambo, siwenze ube iimvakatjhi ehotele lokukhangela-ins kunye khangela-outs (kunye ivale rhoqo kunye ukukhupha yonke), ebukele a elidlulileyo le window uloliwe zange watyelela-landscape ngokobuhlanga. Ukuba kuyenzeka, Yehlisa isantya. Niya Ukugcina izinto zokuhamba kwaye bafumane ixesha ukuhlola kwiindawo zakho.
icebiso yethu ukuya kwangoko kwi-ATM xa ufika eYurophu ndirhoxise imali usebenzisa ikhadi lakho ATM. Yinto elula, kwaye izinga lotshintshiselwano ukuba bakuzisele bethenga ngokuqinisekileyo ingcono kunokuba nawuphi umlinganiselo siye bade onge uba uncedwa ngayo iibhanki ekhaya. Biza ibhanki yakho phambi kwakho, wabashiya ukubuza malunga imirhumo yorhwebelwano ATM ngamazwe, kwakunye ukukwazisa ukuba uya usebenzisa ikhadi lakho phesheya. Ukuba ngaba ubaxelele, Isenokubalumkisa ukuba bacinge ubuqhetseba, yaye iya kuvala ikhadi lakho. kwakhona, cela ukuba ibhanki yakho inazo indawo ngamazwe okanye ubambiswano zendawo iibhanki eYurophu.
Icebiso 9: Ungalibali ukubiza umphathi wakho wefowuni ngaphambi kokuba ucwangcise uhambo oluya eYurophu
Biza nenkampani yakho emva kwakho epheleleyo ekucwangciseni uhambo oluya eYurophu kwaye ufumane i icebof uceba ukusebenzisa ifowuni yakho, uze uqinisekise ukusetha ifowuni yakho ukunqanda iintlawulo data ngengozi (kalula: ukucima iinkcukacha zeselula kunye nokuthintela inani apps ukuba ungasebenzisa kwedatha yeselula). and, njengesicwangciso, anamathele ukuba akhulule uthungelwano Wi-Fi ngenxa bebekhuphela baze ukuthumela ama, kutshekishwa iWebhu, kunye nokusebenzisa apps. IYurophu iindawo ezininzi wifi, ngoko aniyi kuba aphume touch ixesha elide. okukanye, athenge ikhadi leSIM ukuze ifowuni yakho xa ufika eYurophu.
Abasebenzisi qala ngokukhetha isixeko ukuqala ogqiba (okwangoku, ukuba kuyimfuneko ukuqalisa kwaye ukuphelisa uhambo kwi ndawo enye). Emva koko ukhethe umhla wokuhamba, elide kangakanani uhambo iya kuba nendlela ezininzi oya kuyo ukubandakanya. Abasebenzisi kwakhona ukhethe ukuba ufuna ukujonga imizi eYurophu, uManyano lweYurophu, okanye iNdawo yeSchengen. Le app ke ukwenza hambo, Mababhale rates Airbnb kwisixeko ngasinye, kwabo ibhajethi.
Abahambi bangasebenzisa le website Eightydays or the newly launched iOS app to plan their European voyages.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplan-trip-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)